Teknika / Teknolojia - magazine "Potato System"
Tena LOHATENY Tekinika / teknolojia
Resadresaka nifanaovana tamina mpitantana ny varotra isam-paritra TOMRA Food in Russia by Yana Makshanova. Inona ny teknolojia sy fitaovana vaovao nasehon'ny orinasa ...
Ny karaoty tara dia mijinja any amin'ny faritr'i Volgograd. Ao amin'ny iray amin'ireo toeram-pambolena ao amin'ny distrikan'i Sredneakhtubinsky, ny milina fambolena vaovao dia manampy amin'ny fanafainganana ny asa an-tsaha ...
Ny Alliance LLC dia hampiasa vola 1 lavitrisa roubles amin'ny fananganana orinasa famokarana voankazo sy legioma mangatsiaka ao amin'ny distrikan'i Takhtamukaysky. Ozinina fanodinana vaovao...
Ny fanokafana lehibe ny sampana iray an'ny orinasa frantsay mpanamboatra milina fambolena dia natao tany amin'ny faritra Voronezh KUHN (LLC "Kuhn Vostok"). "KUHN Atsinanana "- ny Rosiana voalohany ...
Alohan'ny hidirana amin'ny fitsangatsanganana an-habakabaka maharitra dia mila mianatra ny fomba fambolena sakafo eny amin'ny habakabaka ny olona, ​​hoy ny mpahay siansa ao amin'ny Akademia momba ny fambolena ...
Ny famokarana angovo dia mandray anjara betsaka amin'ny fampiakarana ny vidin'ny rivotra, ka izay tahiry mirindra amin'ity faritra ity dia tena zava-dehibe. Serivisy ...
GC FARMS, mpamatsy akora leggie ho an'ny marika lehibe, mioty ny fahombiazana amin'ny sehatra TOMRA lalin-tsaina
Ny ohatry ny mpikirakira legioma California teknolojia avo lenta dia manaporofo fa ny fahalalana dia hery: ny orinasa dia mampiasa data hanatsarana ny famokarana tsipika, ny kalitaon'ny vokatra, ny vokatra ary ny tombom-barotra ....
XAG dia mampiseho ny mety ho drôna amin'ny tanimbary ovy
Ny drôna fambolena XAG dia nandalo fitsapana an-tsaha tamin'ny famafazana ovy tany amin'ny sahan'i Ekoatera. Ny andrana dia naneho ny mety hisian'ny fiara mandeha an-habakabaka tsy misy mpitaingina ...
Teknolojia avo lenta: fanendasana azo antoka kokoa
Tokony ho laharam-pahamehana hatrany ny fiarovana. Na izany aza, dia matetika no tsy mitovy. Fry vaovao Kiremko CORDA Invicta dia azo antoka amin'ny lafiny rehetra. Ny ...
P. 1 amin'ny 14 1 2 ... 14 Next.
Ny taona dia mety hiditra amin'ny dimy tery ambony indrindra
Nanokatra ny vanim-potoana varotra ny mpamboly ojipsiana